Covid-19 Train Industry ezinika Advise On Travelling | Gcina A Isitimela
ekhaya > Iingcebiso zokuhamba > Covid-19 Train Industry ezinika Advise On Travelling
Covid-19. Yinto yonke ekubonakala ngathi siyakwazi ukuthetha ngayo, ngenxa yesizathu esibalulekileyo. Le ntsholongwane lwaseBritani ihlabathi watshintsha ngokupheleleyo indlela esicinga ngayo kubomi bemihla ngemihla yaye ke Train Travel. Train Travel kuyinto indlela yothutho abaninzi ukusetyenziswa nje ukuzonwabisa yeholide, kodwa ngenxa yokuhamba umsebenzi kwakunye.
ke, Yintoni I-Train Travel Industry Advise On Travelling?
Makhe sithethe ukuba ishishini uloliwe ayenzayo ukuze uhlale ukhuselekile. Uninzi lwezikhululo zikaloliwe ziqinisa inkqubo yazo yokucoca oololiwe nezitishi. Ngaphandle siqinisa ukuhlanza, amatyeli koololiwe kwizikhululo nalo liye lenyuka. Ukucoca kwenzeka ngeyure kwaye kubandakanya ukusetyenziswa kwesibulali zintsholongwane ukosula izandla zokubamba, izibambo, izibambo, kunye nezindlu zangasese. izinto ezongezelelweyo antibacterial, kuquka alcohol usula, zinikwa kwizikhululo, koololiwe, nakwiindawo zokusebenza zabasebenzi.
Train Travel Industry Advise On Travelling Tip 1: Payment intanethi
Sincoma uya 100% licwecwe ukuba ungakwazi. Ukuba wathenga yakho train itikiti online ngenxa yaso nasiphi na isizathu, ukuya phambili zonke iintlawulo kufuneka ibe licwecwe xa kunokwenzeka. Ngoba? Well, kukho eminye imiyalezo edidayo. Utsho Bank of England ithi: "Kanye nayiphi na ocinga ukuba amanani amakhulu abantu udibane nazo, aphawule ukuthwala iintsholongwane okanye neentsholongwane. kunjalo, ingozi ebangelwa yokuphatha inqaku Polymer akukho mkhulu ochukumisa nayiphi na enye efanayo ibonakala ezifana zokubambelela, izibambo, okanye amakhadi etyala. ” Ekuqaleni kwale nyanga ingxelo yephephandaba Ukumangalela World Health Organization (WHO) yamaphepha yayimele ibe okwandisa coronavirus, ngoko abantu kufuneka bazame ukusebenzisa iintlawulo licwecwe endaweni. Kodwa ke ngoko ingxelo yokuba i-WHO yaliwe ukuba wayethe imali iye ekudluliseleni coronavirus, kwaye oko kwaba "nokuchazwa '- ngoko hamba inani.
kunjalo, masenze wafaka ngababini, ngababini kunye, singa? amanqaku amaninzi kwaye iinkozo sele ngaphambili lalisingathwe amanani amakhulu abantu , ukuze ukuba ukhathazekile, ohlawulayo ikhadi licwecwe apho kunokwenzeka, mhlawumbi yeyona ndlela ukuya.
UMilan ukuya eRoma ngoololiwe
UFlorence ukuya eRoma ngoololiwe
Pisa ukuya eRoma ngoololiwe
Naples ukuya eRoma ngoololiwe
Icebiso 2: ukuzahlula Social!
Social ukuzahlula kuthetha HAYI TOUCHY phantsi kwazo naziphi na iimeko. kodwa, kuthekani koololiwe izenze, ngemibhobho, kunye tram?
Nabani uye wasebenzisa rhoqo Train Travel baya kwazi ukuba kube nzima ukuhlala cm ezimbalwa ukuba kude umkhweli elandelayo, yekani i 1m ekucetyiswa. e Milan, abakhweli aye acetyiswa ukuba ahlale malunga isihlalo engenanto, into apho abakhweli kwizixeko busy kakhulu bayakwazi nokuphupha kuphela.
Olona loliwe luxakekileyo lokuhamba izixeko yiLondon. I Transport eLondon, uyayihlaza i "eyomeleziweyo egqiba wokucoca" ukuphucula amanqanaba yezempilo phezu yee-capital izithuthi zikawonke wonke, kodwa akukho ukunyanzelisa ukuzahlula lwentlalo. Oku phezulu kuwe. Eyona nto iphambili kukuba kufuneka uzame ukunqanda ukubamba abanye abantu. Iindawo ezinika umdla ngamaxesha ngaphantsi ephithizelayo xa kunokwenzeka, mabanxibe iiglavu ukuba akunakukwazi ukuphepha komzila ezichukumisayo, isitulo, etc. Phumeza isibulala yakho nawe. Musa ukuthembela kwi Train ipetroli ukubonelela kuwe ngamaxesha onke. Kungcono ukukhuseleka kunokuzisola!
Rotterdam ukuya eParis ngoololiwe
Icebiso 3: Musa Sebenzisa kwizikhongozeli eyo-!
the Train Travel Industry Advise kwi Ukuhamba iquka nezikhokelo kwi mila kwaye musa kunye cuppa zakho ozithandayo. Ekuthini nomkhwa ephethe nokusebenzisa iindebe nokugalelwa xa yaye malunga sele bakhuthazwa njengento eco-abazi hambisa, siyafana ukoyika oku awusasebenzi.
Abaninzi imixokelelwane zekofu zinkulu ukuba kujongisiswe ukuphendula ukuqhambuka coronavirus, ne Starbucks ngokuvala le ukusetyenziswa beekomityi ngebhegi okwethutyana - ngokuqhelekileyo eyenziwe ngeplastiki, iglasi, okanye izinto zoqalo - ukhuseleko lwabathengi kunye nabasebenzi. ngokwesiqhelo, ufumana isaphulelo ngokuza neyakho indebe, kodwa ukuze ufumane impendulo efanayo ngoku! Uya kuza kufuneka ukuba hlawula ukuba isaphulelo encinane ngenxa engozini.
IBerlin ukuya eAmsterdam ngoololiwe
Icebiso 4: Musa Touch!
Abantu abaninzi bacela ukuba ukuthatha uloliwe kuthetha ingozi kakhulu yosulelo. Impendulo elifutshane kukuba ukuba uhleli phezu ngololiwe phakathi 1-2 iimitha nomntu owosulelekileyo ngubani ekhohlela, usengozini yokuba yosulelo.
Kodwa into ocinga ukuba usebenza ngakumbi ukunazisa ukuba umngcipheko ngakumbi kulindeke ukuba intsholongwane abalibala ngenxa 48-72 iiyure kwindawo eqinileyo, ezifana handrail. Oku kusebenza kuphela ukuba Uqeqesha nangona. Yinto nayiphi na indawo kawonkewonke.
Ukuba kufuneka bakubambe komzila, ho, amatikiti, kwaye nangokunjalo, ukuzama ukwenza ngesandla omnye nje okanye ngcono, ingqiniba yakho! Gcina phones kwi enye ngesandla "ezihlambulukileyo" kwaye bageze ngokukhawuleza ungakwazi khona kwakho.
Nuremberg ukuya ePrague ngoololiwe
UMunich ukuya ePrague ngoololiwe
IBerlin iye ePrague ngoololiwe
IVienna ukuya ePrague ngoololiwe
Icebiso 5: Ahambe ngetreyini!
Ukuba uza yokuhamba, akube ngololiwe. Siya ukuba ngokuya ebona akukho ukubuyiselwa yeentlawulo zeehambo ngomoya, ngelixa umdla train dyondzisaka. zibonakala amagama Normal neemeko isicelo ukuba abaninzi ngeempendulo iindiza. "Okwangoku akukho utshintsho iingcebiso iindiza, ukuze iinqwelo-moya zethu zisebenza njengoko amagama aqhelekileyo kunye nomgangatho kunye neemeko amatikiti uqhubeka ukusebenzisa,Uthi: "easyJet.
Ezinye moya alwayo kokuba zisetyenziswa. British Airways Unikela isidanga naphaya kwi-moya ukuya kumantla Italy, ngelixa udade walo moya Aer Lingus yenye uya ngcono kunye nesithembiso: "Iindwendwe owenza ukubhukisha kwi aerlingus.com fiso ukutshintsha imihla okanye kwiindawo iinqwelo-moya zabo ezayo ungenza njalo."
IFrankfurt yaya eBerlin ngoololiwe
I-Leipzig ukuya eBerlin ngoololiwe
Ukuhamba ngeenyawo ukuya eBerlin ngoololiwe
Icebiso 6: Apakishe izimuncumuncu Your Own!
Apakishe okulula zakho xa wena uhamba ngololiwe. Oololiwe abaninzi baye bavale okwethutyana iiLounges zabo zeklasi yokuQala kwaye basusa ukutya kwibhodi. ke, ixesha uba nobuciko nge iibhokisana zakho! Thatha umlomo wakho okanye ukuthenga kusukela kubathengisi kwisikhululo ukutya phambi kokuba bakhwele. La manyathelo ke, eyenzelwe ukukhusela wena nokunciphisa ukunwenwa kwentsholongwane COVID-19!
IMilan ukuya eVenice ngoololiwe
Padua ukuya eVenice ngoololiwe
Bologna ukuya eVenice ngoololiwe
IRoma ukuya kwiVenice ngoololiwe
Siyazi eli lixesha eyoyikisayo. kodwa, sikukhuthaza ukuba uhlale uzolile yaye ubhalo kwindlela yakho nempilo nokhuseleko xa ehamba ngololiwe okanye ezinye iindlela. at Gcina A Isitimela sizinikele ekuqinisekiseni bonke abathengi bethu kunye nabasebenzi zigcinwe zikhuselekile yaye ukuya kumhla nazo zonke iinkqubo ezintsha ukhuseleko kunye nophuhliso.
Ufuna ukuba zilungise ngendlela yethu hetalia us “Covid-19: Indlela Train Industry ezinika Advise On Travelling?” kwi sayithi yakho? Ungakhankanya noba ukuthatha iifoto zethu kunye itekisi asinike ngetyala nge link kule post blog. Okanye nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fcovid19-train-travel-industry-advise%2F%0A%3Flang%3Dxh ‎- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)